Google Docs waxay hadda akhristaan ​​faylasha dxf - Gofumed
Google Docs hadda waxay akhrisan karaan fxlfx files
Febraayo, 2011 Apple - Mac, AutoCAD-AutoDesk, tabo cusub, Internet iyo Blogs
Maalmo yar ka hor Google ayaa kordhiyay taageerada faylasha ee Google Docs. Markii hore waxaad arki kartaa faylasha Xafiiska sida Word, Excel iyo PowerPoint.
Inkastoo la akhriyo oo keliya, Google ayaa muujinaya adkeysigeeda ku aaddan inay siiso kumbuyuutarro awood leh oo nidaamsan oo ka shaqeeya dariiqa. Waxaad sidoo kale filan kartaa in sifooyinkaa lagu daro awoodda lagu eegayo faylasha internetka iyaga oo aan ku dhejin Google Docs. Waxaan sidoo kale arki karnaa sida ay u socoto isbeddellada baahida badan, sida Xafiiska iyo Adobe, laakiin sidoo kale dhinaca mustaqbalka ee mustaqbalka sida taageerida faylasha Apple.
Sidoo kale ma naga helno farxad, waxaad si xad dhaaf ah u arki kartaa faylasha vector, habab, guuri, u dir sida lifaaqa ama la wadaag dadka kale. Laakiin wakhti-raadinta jadwalka shaqada gudaheeda, masruufka taageerada; Dabcan, marnaba ma fileyno in wax laga beddelo.
Wixii dhammaan noocyada 12 ee lagu daray ama kor u kacay, inkasta oo qaar ka mid ah kuwan horayba loo taageeray, Google waxay ku kordhisay karti badan oo muuqaal ah oo muujin karta internetka.
.xls iyo .xlsx (Excel)
.doc iyo .doc (Word) iyo .pages for Apple
.ai (Sawir gacmeed)
.svg (Sawirrada Waalida Sawir leh)
.eps iyo .ps (PostScript)
.xps (Qeexida warqad ee XML)
Waxaan u maleynayaa inay yihiin tallaabooyin muhiim ah, kiiska dxf waa uun istaandarka aasaasiga ah. Laakiin ma ahan kiiska faylasha qaabeynta garaafka.
Post Previous«Previous 3.1 news WordPress
Post Next Qalab CAD ah, qalabyada gvSIGNext »